Aqoonkaab Dhan-qalal / Faalig (Stroke) - Cudur Halis Ah | Aqoonkaab
Dhan-qalal / Faalig (Stroke) – Cudur Halis Ah
Faaliggu waa natiijada ka timaada waxyeello ku dhacday maskaxda, taasoo ka timi dhiigbax dhexdeeda ka dhacay ama dhiig la’aan daran oo ku dhacday qayb ka tirsan maskaxda, halkaana waxaa si gaaban ama si jooogto ah u joogsatada shaqadii ay qaybtaasi qaban jirtay. Faaliggu waa dhacdo dhakhso u timaada oo, si muddo gaaban ah ama joogto ah, qas u galisa habka maskaxdu u shaqeyso. Faaliggu waxay ku kala duwanaan karaan darnaanta taasoo noqon karta tamar-dari muruq oo jirta muddo gaaban ilaa dhibaato sii daran oo keeni karta geeri. Faaliggu waa sababta saddexaad ee ugu tirada badan sababaha geerida keena gudaha wadamada horumaray. Waxay badanaa ku dhacaan dadka da’da weyn laakiin hal nooc (subarachnoid haemorrhage) ayaa ku dhaca dadka da’da yar.
Badanaa miyirku waxa uu lumaa goor hore marka dhiig-baxu yahay mid weyn waxaana laga yaabaa inaanu dib u soo noqon. In ka badan kala badh dadka sidaa loo qabto waxay ku dhintaan gudaha dhawr saacadood ama maalmood. Dadka uu miyirku ku soo noqdo badanaa waxay yeeshaan xoogaa ah qalal, kaasoo noqon kara mid daran. Dhiig-baxa intaa ka yar (oo caadi ahaan ah mid ka yimaada xannibanka halbowle maskaxeed (cerebral thromboses) waxa uu maskaxda u keenaa dhaawac intaa ka yar waxaana laga yaabaa inaanay dhicin miyir la’aan, ee kaliya la arko calaamadaha dhaawaca gaadhay habka dareemeyaasha sida qalal ama dhaqdhaqaaq waxyeeloobay. Kaasi waxa uu inta badan u daran yahay isla ka dib marka uu dhaco faaliggu laakiin waa laga soo ladnaa marka cadka maskaxda ee bararay ee ku yaalla agagaarka barta dhaawacu yaraado. Bararku waxa uu muddo gaaban qas galiya hawlaha dareemeyaasha, marka uu bararku sii yaraadana hawsha dareemuhu way soo noqotaa. Waxaa kale oo dhaca ka-ladnaan, ilaa xad ah, iyadoo sababtu tahay dhiigga baxsaday oo dib loo nuugay. Marka ka-ladnaantu bilaabanto, waxaa jira soo-hagaag gaabinaya laakiin badanaa ah mid roon, haddii aan dhiig-bax kale dhicinna waxaa laga yaabaa in natiijada ugu dambeysaa ay noqoto mid fiican. Hase yeeshee, waxaa laga yaabaa inay jiri doonto xoogaa ah naafo joogto ah.
Sababta ugu weyn ee keenta faaligga waa cudurka halbowleyaasha, gaar ahaan gufeysanka halbowleyaasha (atherosclerosis) (lakabyo dufan ah oo ku sameysma gidaarka xidid dhiig). Faaligga intiisa badan waxaa sababa halbowle soo yaraadaa, xinjir dhiig (thrombosis), ama dhaawac jidheed oo gaadha qayb maskaxda ah iyadoo sababtu tahay dhiig-bax gudaha ama dibadda ah. Dhiig-baxa ah gudaha maskaxdu waxa uu caadi ahaan ka yimaadaa dilaac ku dhaca halbowle yar kaasoo ah mid dhaawacmay oo uu dafiiciyay gufeysan (atherosclerosis), ka dibna waxa uu la dilaacaa cadaadiska dhiigga ee sareeya. Cadaadiska dhiigga ee sareeya ama dhiig-karku waxa uu keeni karaa gufeysan halbowle (atherosclerosis) waana sababta ugu weyn ee keenta faaligga. Dhiig-baxu waxa uu ka dhici karaa meel kasta oo ah maskaxda, calaamaduhunu waxay hadba ku xidhan yihiin meesha uu ka dhacay. Saameyntu ama waxyeeladu waxay aad uga muuqataa qaybaha maskaxda ee shaqo ku leh dhaqaaqa, dareenka, hadalka iyo aragga, oo ku yaalla meelo isku dhaw. Dhiig-bax ka dhaca qaybta hoose ee maskaxda (jiridda maskaxda) aad buu khatar u yahay sababta oo ah waxa uu saameeyaa hawlaha lagama-maarmaan u ah jidhka sida neefsashada iyo garaaca wadnaha. Bararo yaryar oo kuuskuus ah (aneurysms) oo ku sameysama halbowleyaasha ka hooseeya maskaxda ayaa sabab u noqda faalig ku dhaca dadka da’da yar.
Gureysan xidid maskaxeed (cerebral thrombosis), ama gufeysan yar (minor embolism) (oo ah marka qayb yar oo ah dhiig ama dufan uu gufeeyo xidid dhiig) waxa uu keeni karaa saameyn ama waxyeellooyin u eeg kuwa uu keeno dhiig-baxa maskaxdu laakiin caadi ahaan wuu ka waxyeelo yar yahay, ka-ladnaantiisu way ka suurogal fiican tahay. Faaligga ka yimaada gufeysan xidid dhiig (thrombosis) ama gufeysan yar oo soo noqnoqday ayaa ku dhici kara dad leh gufeysan (atherosclerosis) halbowle qoorta ah ama laamihiisa, ama dadka leh albaabo wadne (valves) oo cudur qaba cudur wadne kuwaasoo ay ku sameysmeen xinjiro dhiig oo yaryar, ka dibna inta ay go’aan dhiiggu uu u qaado xagga sare iyo maskaxda.
Dadka uu u dhaco dhafoor-xanuun (migraine) waxay halis dheeraad ah u yihiin faaligga. Dhafoor-xanuunku (migraine) waxa uu badanaa ku sii daran yahay dumarka, waxaana lala xidhiidhiyay heerarka isbeddelaya ee hormoonka la yidhaahdo estaroojen (oestrogen). Haddii aad leedahay dhafoor-xanuun daran oo leh calaamado dhib maskaxeed (neurological) (dhafoor-xanuunka caanka ah), qaadasha kiniinka lidka uurka ee isku-darka ah (combined contraceptive pill) waxa uu dhafoor-xanuunka (migraine) ka dhigi karaa mid sii daran waxaana uu kordhin karaa halista faaligga. Calaamadaha dhib maskaxeed (neurological) waxaa ka mid ah dhibaatooyin ah xagga hadalka iyo aragga, iyo kabuubyo ama jidhidhico ku dhacday adin ama hal dhinac oo ah jidhka. Haddii aad leedahay mid ka mid ah calaamadahaa, waa inaad ka fiirsatid inaad u beddelatid kiniin ah kaliya `progesterone’.
Previous PostDHIIG KARKA (Hypertension) Next PostIsqaadasho La'aanta Dhiigga Lamaanaha!